थर्मल वेयर छनोट गर्दा - फेसन - प्रकाशितः मंसिर २६, २०७४ - नारी
थर्मल वेयर छनोट गर्दा
जाडो मौसममा चिसो हावाबाट जोगिन स्टाइलिस ऊलनको पहिरन त होला तर के त्यसले भित्री सुरक्षा प्रदान गर्छ ? जाडोमा शरीरलाई सही तरिकाले न्यानो राख्न थर्मल वेयर बडी वार्मर उपयुक्त हुन्छ ।
फेब्रिक : बजारमा थुप्रै प्रकारका फेब्रिकका थर्मल वेयर उपलब्ध छन् । भित्री लेयरमा सफ्ट कटन तथा बाहिरी लेयरमा ऊलन भएको थर्मल वेयर नै उत्तम हुन्छ । यस्तो थर्मल वेयरको भित्री लेयरले न्यानो प्रदान गर्छ भने छालाले आरामपूर्वक श्वास लिन पाउँछ । यसमा र्‍यासेज आउने खतरासमेत रहँदैन । यो नरम, आरामदायक तथा छाला फ्रेन्डली हुन्छ ।
पहिरनअनुरूप : थर्मल वेयरको चयन आफ्नो आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्छ । आजभोलिका टु पिस थर्मल वेयर फरक–फरक डिजाइनमा उपलब्ध छन् । अपर पार्टको डिजाइनमा स्लिभलेस, हाफ स्लिव, फुल स्लिवका साथमा डिप राउन्ड नेक, भी नेकबाहेक स्पेगेटी स्टाइल पनि चल्तीमा छ । बटममा लेगिङ, पाइन्ट तथा केप्री स्टाइल पनि उत्तिकै चलेको छ । यसलाई आफ्नो पहिरनअनुरूप सहज रूपमा क्यारी गर्न सकिन्छ ।
थर्मलले कसरी काम गर्छ ?
बडी वार्मरले इन्सुलेसन प्रविधिबाट काम गर्छ । यसमा प्रयोग हुने फेब्रिकले शरीरको नरमपनको थोरै भाग सोसेर सुकाउँछ र शरीर तथा कपडाका बीचको इन्सुलेटिङ लेयरमा हावाको प्रवाह कायम राख्छ । यसलाई राम्रोसँग बुनिएको हुन्छ । ऊलनको थर्मल वेयरले शरीरको तातोपन कायम राख्छ ।
थर्मल वेयरको सफाइमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ किनभने यो सीधै शरीरको सम्पर्कमा रहन्छ । यसको सफाइका लागि बजारमा उपलब्ध ऊलन डिटर्जेन्ट लिक्विड नै प्रयोग गर्नुपर्छ । तातोपानीले धुँदा थर्मल वेयर लुज हुने खतरा हुन्छ ।
यसलाई केही समय ऊलन लिक्विड डिटर्जेन्ट हालिएको चिसो पानीमा भिजाएर राख्नुपर्छ । त्यसपछि हातले रब गर्दै राम्रोसँग धुनुपर्छ । यसबाट डिटर्जेन्ट पूर्णरूपले पखालिन्छ । त्यसपछि एकपटक एन्टिसेप्टिक ड्रप हालिएको पानीमा चोबलेर निकाल्नुपर्छ । यसले थर्मल वेयर कीटाणुरहित हुन्छ । थर्मल वेयरलाई वासिङ मेसिनको ड्रायरमा सुकाएपछि घाममा सुकाउनुपर्छ जसले गर्दा यो पूर्णरूपमा सुक्छ ।
चैत्र २६, २०७४ - बिद्यालय छनौट गर्दा
आश्विन २३, २०७४ - ड्रिम वेयरको पहिरनमा
आश्विन १, २०७४ - आउटडोर फर्निचर कसरी छनोट गर्ने ?
भाद्र १६, २०७४ - आर्शियाको नयाँ आउटलेट
भाद्र ६, २०७४ - दर तयार गर्दा
चप्पल क्रेज वैशाख १२, २०७८
नारी अस्तित्वमा समर्पित नमूना कलेजको फेसन सो चैत्र ३१, २०७७
पहिरनमा रंगको प्रभाव फाल्गुन ७, २०७७
थरिथरिका स्वेटर ड्रेस माघ ३, २०७७
न्याना पहिरन पुस २२, २०७७
थरिथरिका मास्क आश्विन १२, २०७७